नेपाल मा Blackjack को नियमहरु | BlackJack77
मुख्य	/ ब्लेक नियम
कालो ज्याकका खेलाडीहरू 21 को कुल हात मानको रूपमा प्राप्त गर्न लक्ष्य राख्छन्। कालो जैकको खेलले अरू खेलाडीहरू र सँधै डीलर समावेश गर्न सक्छ। यो डिलर हो जसले तपाईंलाई जित्न को लागी हराउन आवश्यक छ। यसको अर्थ हो कि खेलाडीको हातको मूल्य डीलरको हातमा मूल्यसँग तुलना गरिएको छ। तपाइँलाई सही चाल बनाउन मद्दतको लागि यहाँ आधारभूत ब्ल्याकैक मार्गदर्शक हो।
व्यापारीले प्रत्येक खेलाडीलाई दुई कार्ड दिनेछ।
तपाईंको शर्त बनाएर सुरू गर्नुहोस्, निर्णय गर्नुहोस् कि कति पैसा तपाईं ब्लैकज्याकमा दावी गर्नुहुनेछ। त्यसपछि, "डील" विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस्।
निर्णयको समय - प्लेयरले हिट, डबल डाउन, स्ट्यान्ड वा स्पिलिट गर्ने छनौट गर्नु पर्छ।
यी सर्तहरू के मतलब छ?
"हिटिंग" एक अतिरिक्त कार्ड को लागी किया जा रहेको छ कि यो हात मा कुल मूल्य लाएगा 21 को लागी लायक हुनेछ। थप कार्ड ले 21 देखि अधिक मूल्य लेनी चाहिए, तब तपाईं शर्त गुमाउछ।
"विभाजित" एक विकल्प हो जब तपाईंसँग उही सटीक मानको दुई कार्डहरू छन्। तपाईं दुई हातहरू एकबाट बाहिर छनौट गर्न र तिनीहरूलाई अलग रूपमा खेल्न सक्नुहुन्छ।
"स्थिर" निर्णय गर्दैछ कि अरु कार्डहरू सारिनेछैनन्। यो निर्णय हुन सक्छ यदि तपाईं खेलाडीलाई विश्वास छ कि हातमा तिनीहरूको मूल्य डीलर भन्दा बढी हुनेछ।
"डगलिंग डाउन" को अर्थ छ कि तपाईं आफ्नो मूल शर्त डबल गर्न को लागी छ र एक अधिक कार्ड प्राप्त गर्नुहोस। यो एक राम्रो छनौट हुन सक्छ यदि तपाईंको दुई कार्ड अधिकतम 10 को लायक हो।
विनका लागि सजिलो ब्ल्याक जैक नियम
जब एक खेलाडी ब्ल्याक ज्याक हुन्छ, सामान्यतया, डीलरले तीन देखि दुई तिर्नेछ। यदि एक खेलाडीले कुल मिलाएर डीलरलाई धकेल्छ भने, तब व्यापारीले मिलानको म्याच रकम तिर्नेछ। तथापि, जब कुलको डीलर भन्दा कम हुन्छ, त्यसपछि शर्त हराएको छ। केहि पनि छैन यदि डीलर र खेलाडी दुवै को ब्ल्याकैक हो।
ब्ल्याकैक प्ले अनलाइन गेमरहरूको लागि ब्ल्याकैक नियम चार्ट आवश्यक छ। अनलाइन प्ले गर्दा, यो एक राम्रो खेल सम्भवतः गणित रूपमा पार गर्न कठिन हुन्छ, यो एक पारंपरिक क्यासिनोमा कार्ड गणना गर्न सकिन्छ।
21 ब्ल्याकैक प्ले कसरी बुझ्नको लागि कार्ड मानहरू कुञ्जी हो। सुरु गर्नका लागी, सबै नम्बर कार्डहरूसँग स्कोर मान रहेको छ जुन 2-10 मा संकेत गरिएको छ। त्यसपछि, राजा, रानी र जैक दस प्रत्येक मूल्यको मूल्य। अन्तमा, ग्यारेन्टी वा एक वार्षिकोत्सव Ace कार्ड हो। Ace संभवतः डेक मा सबै कार्डहरु को सबै भन्दा अधिक प्रतिष्ठित छ किनकि यसले तपाइँलाई जित्ने छिटो पुग्न मद्दत गर्दछ र तपाइँलाई बस्ट गर्दा "दोस्रो मौका" दिन्छ।
एक त्वरित टिप ब्लैकज्याक कसरी गर्ने भनेर सिक्ने हो कि तपाईले लामो बाटो लिन सक्नु हुन्छ आफ्नो ए र 8 को विभाजन गर्न। यो सामान्यतया हरेक खेलमा एकैपटक गर्न सकिन्छ र एक ट्रिक हो जसले विजेता एक हराएको हात परिवर्तन गर्न सक्छ।
अनुभवी खेलाडिहरु संग क्यासिनो ब्ल्याक जैक खेल्न को लागी अन्वेषण गर्दा, तपाईं खेल को समयमा हार्ड या नरम को सुनेको हुनेछ। कालो जैकमा कडा र नरम अर्थ के हुन्छ? आधिकारिक ब्ल्याक ज्याक नियमहरूको अनुसार, एक हार्ड हात भनेको बिना अक्ष कार्डहरूको कुनै संयोजन हो। यसको विपरीत, एउटा मुलायम हातले तपाईंको अर्थमा कम से कम एक इक्काको अर्थ छ।
जस्तै खेलाडीले ब्ल्याक ज्याक शर्त नियमहरू छन्, ब्ल्याकैक डीलर नियमहरू छन्। डिलरहरूले डेकहरू श्वास गर्नुपर्नेछ र यदि दुई खेलाडी भन्दा बढी खेल्छन् भने पनि दुई डेक भन्दा बढी प्रयोग गर्दछ। कार्डहरू सधैं अनुहारमा झल्किन्छ, र बायाँमा खेलाडीलाई पहिला निचोटिन्छ। एकपटक पहिलो गोल पूर्ण भएपछि, र डीलरले आफ्नो कार्ड अन्तिम छ, त्यसपछि तिनीहरू प्रत्येक खेलाडीलाई अर्को कार्डको सामना गर्छन्, यो सुनिश्चित गर्दछन् कि तिनीहरू सामना गर्दछन्।
घरमा ब्ल्याकैक खेल्दा निर्णय गर्नुहोस् कि तपाइँ नि: शुल्क वा वास्तविक पैसा खेल्न चाहनुहुन्छ भने। अभ्यास उत्तम बनाउँछ, विशेष गरी यस गेमको साथमा तपाइँले आफ्नो कौशल निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ। तपाईं नि: शुल्क खेल्नुहुँदा, खेलको केहि कम्प्यूटर संस्करणहरूले तपाईंलाई खेल तल मान्नुहुँदा तपाईंलाई चेतावनी देखाउनेछ।
एकपटक तपाईंले आफ्नो क्षमताहरू निर्माण गर्नुभए पछि, तपाई कसरी पत्ता लगाउनुहुनेछ कि कसरी सही बाटोमा लिने। यसको अर्थ तपाईंको शर्त बढाउन वा तदनुसार यसलाई कम गर्न बुझ्दछ।
कालोज्याकमा कसरी विजयी हुन्छ
कालो जैकमा एक गोल जित्ने तीन आधारभूत तरिकाहरू छन्। सबैभन्दा सरल हो जब तपाईंको पहिलो दुई कार्डहरू 21 को लायक हुन्छन्। उदाहरणको लागि, यदि तपाईं 10 लायक राजा र 10 अङ्कको लायक हुनुहुने ब्ल्याकैक छ। यो सत्य हो जबसम्म कुनै डीलर ब्लेक्याक छैन। ब्ल्याक ज्याक जित्नको लागि अर्को कुञ्जीको अन्तिम मूल्य हो जुन 21 सकेसम्म नजिक छ, जबसम्म यो मूल्य डीलर भन्दा ठूलो छ। एकै तरिकाले, यदि व्यापारीले कार्डहरू ड्र्याग गर्दछ जुन 21 को मूल्य भन्दा उच्च छ।
तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ, के यसले ब्ल्याक ज्याकमा जित्न सम्भव छ? सैद्धान्तिक, हो, यद्यपि यो दावीको धेरै फुटनोटहरू छन्। सबैभन्दा पहिला, यो कार्ड गिनती वा अन्य छायात्मक चालहरू र एक वास्तविक क्यासिनोमा खेल्दै समावेश गर्दछ। जब यो अनलाइन ब्ल्याकैक आउँछ - तपाईले सबै भन्दा राम्रो काम गर्न सक्नुहुनेछ इष्टतम रणनीति पछ्याउनुहोस्, यसैले न्यूनतममा घरको किनारा घटाउँदै।
क्यान्सरको गणना नगरी कसरी ब्ल्याकैकमा जित्ने सोच? रणनीतिहरुमा एस क्रमबद्ध, छेद कार्डिंग, किनारा को नाम मा केहि क्रमबद्ध गर्दै छन्। उदाहरणका लागि, इक्का क्रम अनुक्रमणिका ढेर भित्रका कार्डहरूको मेमोरीमा चित्रण गर्नको लागी कल, विशेष गरी, ती इक्काको माथि। तपाईंको आशा तपाईं एकता व्यवहार गर्न आधार मा शर्त बनाउनु हो।
यदि तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ अनलाइन अनलाइन क्यालेजाज कसरी जित्नु हुन्छ तपाईले विभिन्न प्रकारका खेलहरू प्रयास गर्नुपर्छ। भिडीयो ब्ल्याकैकमा कसरी विजय प्राप्त गर्न तपाईंलाई व्यवस्थित हुन आवश्यक छ। समयको साथ, तपाईलाई थाहा पाउनुहुनेछ जब सबैभन्दा राम्रो समय डबल डाउन र जित्न सकिन्छ।